Dambudziko naJon Stewart ndiyo yakanyanya kutariswa isina kunyorwa akateedzana paApple TV + | IPhone nhau
Dambudziko naJon Stewart ndiyo yakanyanya kutariswa isina kunyorwa akateedzana paApple TV +
Apple yakatanga musi waGunyana 30 Dambudziko naJon Stewart, chirongwa chave -yakatarisa-isina kuratidzwa show paApple TV +, kurova Kutaurirana naOprah.
Muchikamu chega chega, Jon Stewart, anogara pasi nevaenzi vakasiyana kuti vakurukure musoro mumwe chete icho chikamu chekukurukurirana kwenyika dzazvino. Uye zvakare, iyo zvakare ine yevhiki nevhiki podcast iyo inonanga mumusoro wakafukidzwa muchirongwa.
Chikamu chekutanga, chakanzi hondo, nekutora chikamu kwaMunyori weVeterans Affairs, Denis McDonough, inotarisa kumatambudziko ehutano evarwi vehondo vekuAmerica vane tarisiro yakanangana nenyaya yemakuva akawanda. Sekureva kweVaraidzo Svondo, ino yekutanga episode, yakave yakanyanya kutariswa isina kunyorwa akateedzana paApple TV +.
Chikamu chechipiri, chatove chiripo muUnited States, asi chisingazosvika kuSpain kusvika Gumiguru 28, chakatumidzwa zita Libertad uye mune pfupiso yatinogona kuverenga:
Vanhu veAmerica vanoda rusununguko, asi ndeupi mutengo wavanoda kubhadhara iwo? Chii chatinogona kudzidza kubva kune dzimwe nyika dzichitambura kuti dzive vakasununguka?
Stewart anoti izvo zvakateedzana yaive yakagadzirirwa kuve yakakomba kupfuura yake yapfuura Comedy Central hit, achisimbisawo kuti yakafanana nechirongwa chake chemberi asi isingavaraidze uye, pamwe, yakakwana.
MunaEpril, Apple yakazivisa Dambudziko naJon Stewart, ichitaura kuti akateedzana akarongwa kuve nhevedzano yemwaka yakati wandei, Hora rimwe rakareba uye imwe chete track.
Chikamu chekutanga chiri muChirungu na subtitles in Spanish pamusoro pemimwe mitauro makumi mana, saka kana iwe wanga uchitarisira kunakidzwa nechirongwa ichi muchiSpanish, uchafanirwa kugadzirisa zvinyorwa zvidiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » appletv » Dambudziko naJon Stewart ndiyo yakanyanya kutariswa isina kunyorwa akateedzana paApple TV +